Kasamba Review - Famakiana ara-tsaina an-tserasera
Hevitra misimisy kokoa amin'ny Internet > Kasamba Review
Manolotra tolotra tsy fahita firy tahaka an'i Kabbalah, I Ching, ny lahatsoratry ny aura, ary na dia ny sakaizan'ny biby aza
Ny fandaniana dia manomboka ambany amin'ny $ 1.99 isa-minitra ho an'ny mpanolo-tsaina sasany
The Kasamba Ny bilaogy dia manasongadina lahatsoratra nosoratan'ireo mpitsikilo mba hahalalany azy ireo tsaratsara kokoa
Tolotra manokana fampidirana ny 50% amin'ny famakianao mamaky voalohany
Ny fanatitra dia mamerina raha mangataka ao anatin'ny 72 ora ny fisainana ara-tsaina raha tsy mahafa-po anao
Hira sy hevitra momba ny psychic hanampy anao hisafidy iray ho an'ny famakiana
Manolotra karazana tolotra tsy manam-paharoa mahalana hita ao amin'ny tranokala hafa mamaky soratra masina, toy ny fitsaboana biby an-tsokosoko, lesona aura, ary ny soroka
Fomba maro isan-karazany, miaraka amin'ny tahiry manomboka ambany $ 1.99 isa-minitra
Kasamba dia manao sehatra ho an'ny mpamaky mpamaky sarimihetsika, tsy misy fijerena screening
Ny tahan'ny mpamaky sasantsasany dia mihazakazaka mihoatra ny $ 19.99 isa-minitra
Ny fivoahana telo minitra maimaim-poana dia fohy loatra mba hahazoana fahatsapana marina ho an'ny psychic na ny serivisy
Kasamba dia manolotra sehatra ho an'ny psychics mahaleo tena, noho izany dia tsy misy fombafomba fandrefesana. Raha ny marina, izy ireo dia mitaky ny fahatsapana ara-pihetseham-po mba hiaraka. Ampiasao amin'ireo tranonkala mamaky teny toy izany, diniho tsara ny fanamarihana sy ny halavan'ny fotoana miasa amin'ny Kasamba. Azonao atao ny mahazo vintana amin'ny soso-kevitra vaovao, mora kokoa, saingy kely dia mampidi-doza. Raha ampitahaina amin'ny vohikala hafa, izay misy fitsipika henjana henjana, dia azo antoka fa fanaraha-maso lehibe izany.
Misafidiana psychic azo antoka sy azo antoka
Ny sivanam-pikaroham-pikarak'izy ireo dia afaka mametraka tsindry amin'ny valiny sy ny taham-panafody, saingy miaraka amin'ny psychic maro be dia nisoratra niaraka tamin'ity orinasa ity, dia mety ho kely dia kely ny manao safidy. Kasamba dia nanisy fanamafisam-peo amin'ny fampidirana fitsaboana vaovao, noho izany dia antenaina fa hisy dingana voajanahary hitranga izay hanosihosena ny mpanolotsaina matanjaka kokoa.
Kasamba dia manana tranokala mazava ho azy ireo mba hahafahanao mahita haingana ny faritra tianao hijerena azy. Ohatra, raha tianao ny "fitiavana psychic" dia afaka misafidy iray izay manokana ny fisaraham-panambadiana, mampiaraka, na ny tsy fifankahazoana mihitsy aza. Fomba tsotra hamotehana ny fikarohana izany.
Ny vidin'ny mpamaky psychic dia manomboka amin'ny $ 1.99 isa-minitra, ary afaka mihazakazaka mihoatra ny $ 19.99 isa-minitra. Kasamba dia manolotra telo minitra maimaim-poana, saingy ianao dia tokony ho tolo-kevitra hanoloana ny fampiroboroboana tsaratsara kokoa, satria tsy ho afaka hamaky ny famakiana ao anatin'ny telo minitra ianao. Ny mpamaky tarot, ohatra, dia mety handany iray minitra (na mihoatra) fotsiny raha te hahita ny fitarihana karakarinao, hanakona ireo karatra, ary handamina azy ireo. Ataovy azo antoka fa hahazo fampiroboroboana izay ahafahanao mahafantatra tsara ny serivisy miaraka amin'ny tahan'ny mety. Ny karazana famakiana sy ny tsikombakomba tsirairay dia samy hafa ny vidiny, toy izany koa. Afaka mampifandray amin'ny paypal ianao na hiditra amin'ny antsipirian'ny karatry ny karatrao, ary ianao dia hovaliana araka izay ampiasainao.
Kasamba manana safidy tsara amin'ny fifandraisana. Ary na dia miovaova aza ny fomba fifandraisan-davitra isaky ny safidin'ny saina, dia hahita safidy telefaona, chat, ary mailaka isan-karazany ianao. Midika izany fa afaka misafidy ny fomba tianao ny famakianao ianao.
Raha tsy faly amin'ny famakiana mamaky teny ianao, dia mametraka fangatahana fialana ao anatin'ny ora 72 avy amin'ny faran'ny vakiteny. Ataonao izany amin'ny alàlan'ny famitana "tapakila fanampiana" ao amin'ny foibe famolavolana azy. Ny fangatahana rehetra dia miankina amin'ny fankatoavan'i Kasamba, saingy tsy mazava hoe haharitra hafiriana izany.
Miaraka amin'ny karazana psychika marobe manolotra fahaiza-manao isan-karazany sy elanelam-bidy samihafa, tsy maintsy hahita olona mifanaraka amin'ny teti-bolanao sy izay ilainao ianao. Kasamba dia manolotra sasantsasany tsy mahazatra, saingy lasa iray amin'ireo sampan-draharaha matihanina goavana indrindra manerana izao tontolo izao, mifantoka amin'ny famelana psychic hametra-pialana tsy tapaka sy hametraka orinasa tsy miankina amin'ny fanohanan'ny orinasa lehibe iray.